UMTSHATO WABANTU ABADALA KUPHELA: INDLELA YOKUXELELA IINDWENDWE AWUBAMEMI ABANTWANA - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho I-7 Dos kunye neDin Donts yokuba nabantu abadala-kuphela umtshato
I-7 Dos kunye neDin Donts yokuba nabantu abadala-kuphela umtshato
Ungamemi abantwana emtshatweni wakho? Nazi iindlela ezilungileyo (kunye ezimbi) zokwenza malunga noku. I-KT Merry Photography
U-Irina Grechko nguMhleli oMkhulu weFashoni kunye neNkcubeko yeRefener29.
U-Irina ngumhleli onamava ojolise kwimfashini nakwisiqulatho somtshato.
U-Irina wakhonza njengoMncedisi woMhleli weeNdaba kunye noCwangciso lweNqaku.
Uluhlu lwakho lweendwendwe zomtshato ekugqibeleni luxhomekeke kuwe, ke ukuba ufuna ukubhiyozela ngaphandle komntwana, wamkelekile kuwo (iitoni zezibini ezikhetha ukuzenza). Oko kwathiwa, nabani na ocwangcisa umtshato wabantu abadala kuphela ujongana nemicimbi embalwa yokuncamathela, ukusuka kwimibuzo enesigama sokumema ukujongana neendwendwe ezingazukufumana myalezo. Elona cebiso lethu lilungileyo kukunyaniseka, kodwa sibe nobuchule. Landela ezi ngcebiso zibalulekileyo zokucwangcisa umtshato wabantu abadala kuphela ngaphandle kokulimaza iimvakalelo zomntu.
ngowuphi umnwe emtshatweni
1. Yenza ngokuchanekileyo nangeNkathalo iZimemo zakho
Yenze icace kwasekuqaleni ukuba umtshato wakho ngabantu abadala kuphela. Njani? Jongana nesimemo ngasinye ngqo kwabo bamenyiweyo, kungenjalo ezinye iindwendwe ezinabantwana zinokucinga ukuba lonke usapho lwamkelekile. Ungahamba imayile eyongezelelweyo kwaye ubhale amagama abo ngqo kwikhadi lokuphendula (ngendlela efanayo owathetha ngayo kwimvulophu yangaphandle). Ke bonke abaya kuyenza kukujonga ukuba 'bazakuzimasa' okanye 'abazukuya.' Ngale ndlela, kuya kucaca kuphela 'Mnu. kunye noNksk. John Smith 'bayamenywa. Sebenzisa i-e-RSVP? Vumela i-drop-down iqhosha kuphela nangona bebaninzi abamenyiweyo.
2. Musa ukuPrinta 'abantu abadala kuphela' kwizimemo
Akufanele uzive unetyala ngokugcina umtshato wakho kwindawo engenamntwana, kodwa ayisiyontlonelo ukucacisa iminqweno yakho ngaphambili kunye nendawo kwizimemo. Ukwenza loo ndlela yeyona ndlela ilula yokuphazamisa iintsiba. Ukuba nomtshato ongenamntwana kunokuba ngumcimbi obuthathaka kakhulu kwezinye iindwendwe, ngakumbi amalungu osapho asedolophini kunye nabahlobo abasondeleyo kunye nabantwana. Ngendlela enobuchule, cela usapho lwakho, amalungu omtshato kunye nabahlobo ukuba basasaze eli lizwi kwiindwendwe ngomlomo ukuze babe nexesha elininzi lokufumana umntwana.
3. Ngaba Yikhankanye Kwiwebhusayithi Yakho Yomtshato
Iwebhusayithi yakho yomtshato yindawo yokwabelana ngolwazi olubalulekileyo lomtshato-zombini iziseko kunye neenkcukacha ezongezelelweyo Akufanelekanga ukuba ubeke iimemo (cinga: iirejista, iindlela zothutho, indlela yokunxiba kunye nokunye). Oko kuyenza ukuba ibeyindawo entle yokutsala inqaku malunga nokugcina abantu abadala kuphela-ngaphambi kokucebisa nangayiphi na indlela yokukhetha abantwana kuloo ndawo (umnwe onengcinga).
utata weengoma zomtshakazi
4. Ngaba unayo Intombazana yeNtyatyambo kunye noMthwali weRingi kumsitho (ukuba uyafuna)
Wamkelekile ukuba ube neentombazana zeentyatyambo, abathwali bemisesane kunye nabagqatswa abancinci kumsitho wakho. Kodwa ke icandelo elikhohlisayo kukuba, ukuba uyabafuna kumsitho kwaye hayi ulwamkelo, baya kuziva ngathi bayaphoswa yinxalenye yolonwabo (bangabantwana emva kwayo yonke loo nto). Kwimeko apho, kulungile ukuza nesicwangciso sokubaphatha emva komsitho okanye iyure ye-cocktail. Unokuqesha inkonzo ye-nanny yobungcali ukuze ujonge kwindawo ekufuphi kwindawo yakho yokwamkela. Sebenza nenkonzo yakho ye-nanny ukucwangcisa imisebenzi ekhethekileyo, efanelekileyo yobudala enje ngemisebenzi yezandla kunye nemidlalo, kwaye ucwangcise izidlo ezinobuntwana kunye nezonwabisayo, njengeklasi yokwenza ipitsa okanye isidlo sakusasa esenzelwe isidlo sakusasa.
5. Musa ukuyenza ukuba ibe yindawo yokwamkela abantu abadala
Ngelixa unokuba nabantwana emtshatweni wakho womtshato kwaye usenokwamkelwa kwabantu abadala kuphela, khumbula ukuba ungaguquki imigaqo yabanye abantu abanabantwana. Ukuba uvumela ezinye iindwendwe zize neentsapho zazo hayi ezinye, kusenokubonakala ngathi nguwe okhethiweyo ukuba ngoobani abantwana ababengamenywanga- nto leyo enokuthi ikhokelele kwimeko entle. Ukumema bonke abantwana kumsitho kuphela akunakusebenza, kuba banokucaphuka xa kuthi ndlela-ntle kubazali babo okanye xa bebona ezinye iindwendwe zisiya ethekweni xa kufuneka begodukile.
6. Ngaba ubize nabani na ocinga ukuba abantwana babo bayamenywa
Kuqhelekile ukuqala ukuva kumalungu osapho ababuza ukuba kutheni abazala bakho abancinci, abatshana bakho kunye nabatshana bakho bengavumelekanga ukuba beze. Lungisa umba obuthathaka kwangoko ngokubiza kwaye ucacise, ngelishwa, awunakumema wonke umntu ongathanda. Ungasibeka ityala kuhlahlo-lwabiwo mali nakwezithintelo zendawo (ukuba uyafuna), ezihlala zikhusela uqhanqalazo ngakumbi kwaye zithintele iimvakalelo ezibuhlungu. Kodwa khumbula, awunyanzelekanga ukuba unike inkcazo ende. Awuzukukholisa wonke umntu, kodwa kulungile ukuthi umtshato wabantu abadala kuphela sisigqibo osenzile, kwaye ushiye kuloo nto.
7. Musa ukuGungqa
Nokuba uziphendulile ngokufanelekileyo izimemo, kwabelwane ngazo ngomlomo kunye nokuthumela inqaku kwiwebhusayithi yakho, zilungiselele ukufumana ukubuyela umva. Khawukhumbule nje, njengakwezinye izigqibo ozenzayo, olu lusuku lwakho kwaye wena neqabane lakho nigqibe ekubeni ngubani omenywe emtshatweni- ixesha. Sombulula umba kwaye ucaphukise abazali ngovakalelo, kodwa musa ukubuya umva. Ukuba undwendwe olunomsindo ngokwenyani lusezandleni zakho (kwaye ukonwaba kwabo kuthetha lukhulu kuwe), sisenzo sobubele ukujonga ukuqesha umntu oza kubagcina ukuze babukele abantwana babo ekhaya ngalo lonke ixesha lomtshato, umsitho ubandakanyiwe. Ekupheleni kosuku, eyona nto unokuyenza kukucinga kunye nokunceda iindwendwe zakho ezinabantwana.
Ixabiso eliphakathi kwindandatho yokuzibandakanya
Andiqinisekanga ukuba uqale phi ngokucwangcisa umtshato? Thatha i-Quiz yethu yeSitayile kwaye siza kudibanisa umbono wesiko lomtshato kunye nabathengisi ukuze batshatise, wena kuphela. Emva koko, yakha iwebhusayithi yasimahla, eyenzelwe wena yomtshato ukugcina iindwendwe zakho zinolwazi (kwaye ziyavuya!) Malunga nezicwangciso zakho, kunye nexesha elonga ixesha loMphathi woLuhlu lweeNdwendwe ukulungiselela abantu bakho. Kanangcono? Unokuvumelanisa umphathi wakho woluhlu lweendwendwe kunye newebhusayithi yomtshato ukuze uhlaziye yonke into ngaxeshanye.
izipho zeminyaka engama-25 zomtshato
uya kuba iibhokisi zezipho zam zontombi
Iiseti zomtshato wom-oki
Isipho seminyaka emihlanu somtshato
Ukutshintsha igama kwilayisenisi yokuqhuba
ilokhwe yomtshato emfusa nemfusa